Beddelaan BurstOcean In US dollar
Updated 20/01/2021 14:56
Beddelka BurstOcean In US dollar. Ocean Protocol qiimaha US dollar maanta ee suuqyada isweydaarsiga lacagta digital.
10 Ocean Protocol = 5.86 US dollar
Qiimaha sarrifka lacagta digital wuxuu leeyahay qiimo celcelis ahaan maalintii. Qiimaha sarrifka laga bilaabo Ocean Protocol ilaa US dollar) laga soo qaatay keydka macluumaadka lagu kalsoon yahay. Dhammaan hawlgallada sarrifka crypto waxaa lagu sameeyaa suuqyada sarrifka crypto. 1 Ocean Protocol hadda waa 0.59 US dollar. 1 Ocean Protocol ayaa kor u kacay 0.02812 US dollar. Marka loo eego 1 Ocean Protocol hadda waxaad u baahan tahay inaad bixiso 0.59 US dollar.
Heerka Sarrifka Ocean Protocol In US dollar
Usbuuc ka hor, Ocean Protocol waa la isweydaarsadaa 0.016817 US dollar. Lix bilood ka hor, Ocean Protocol waxaa lagu badali karaa 0 US dollar. Sanad ka hor, Ocean Protocol waxaa lagu iibin karaa 0 US dollar. Shaxda heerka sarrifka ayaa ku yaal bogga. Isbeddelka heerka sarrifka lacagaha Ocean Protocol to US dollar muddo bil ah waa 0%. 0% - isbadal ku yimid heerka isdhaafsiga ee Ocean Protocol ilaa US dollar sanadkii.
Ocean Protocol (OCEAN) In US dollar (USD) qiimaha sicirka
BurstOcean ugu fiican US dollar
Bixinta ugu fiican BurstOcean qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso BurstOcean maanta.
BurstOcean ugu fiican US dollar dhammaan suuqyada adduunka
Beddelaadda Lacagta digital Ocean Protocol US dollar
Ocean Protocol (OCEAN) In US dollar (USD)
10 Ocean Protocol 5.86 US dollar
50 Ocean Protocol 29.28 US dollar
100 Ocean Protocol 58.56 US dollar
250 Ocean Protocol 146.41 US dollar
500 Ocean Protocol 292.81 US dollar
1 000 Ocean Protocol 585.62 US dollar
2 500 Ocean Protocol 1 464.05 US dollar
5 000 Ocean Protocol 2 928.11 US dollar
Beddelaadda Lacagta digital hadda 10 Ocean Protocol ayaa ku siinaya 5.86 US dollar. Waad iibsan kartaa 14.64 US dollar for 25 Ocean Protocol. Beddelaadda 'Lacagta digital' ayaa hadda bixisa 29.28 US dollar for 50 Ocean Protocol. Hadaad leedahay 100 Ocean Protocol, ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu iibin karaa 58.56 US dollar. Beddelaadda Lacagta digital hadda 250 Ocean Protocol ayaa ku siinaya 146.41 US dollar. Waad ku iibin kartaa 500 Ocean Protocol ee loogu talagalay 292.81 US dollar .
Ocean Protocol (OCEAN) In US dollar (USD) Heerka Sarrifka
Beddelaan OCEAN/BUSD maanta 20 January 2021
31/01/2018 0.016817 -
Maanta 500 OCEAN = 0.016817 USD.
Ocean Protocol (OCEAN) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda
Ocean Protocol iyo US dollar
Ocean Protocol codka lacagta digital OCEAN. Ocean Protocol ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 19/03/2017.